Jagriti Khabar, Author at jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
२०७८ असोज २ गते १३:४३
काठमाडौं : मलेसियामा कोरोना भाइरस (को’भिड–१९) सं’क्रमणका कारण नेपाली कामदारहरुको मृ’त्यु हुने क्रम बढेको छ । को’रोनाबाट पछिल्ले पटक बुधबार गोरखा नगरपालिका १० बिरेन्चोकका बहादुर आले मगरको मृ’त्यु भएको हो । कोरोना संक्रमण भई विगत १२ दिनदेखि उपचाररत ४४ वर्षीय मगरको बुधबार बिहान मृ’त्यु...
२०७८ असोज २ गते १३:३४
प्रदिप पंगेनी/मलेसिया । मलेसिया ८ देखि ९ लाख नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलूक, आफ्नो देशमा योग्यता अनुसारको रोजगारी र उचित पारिश्रमिक नपाएर बाध्यता वा रहरले बिदेशीने नेपालीको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। नेपालमा सुने जस्तो नहुने र कल्पना भन्दा धेरै मार्मिक र दर्दनाक छ, मलेसिया।...
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ?
२०७८ असोज २ गते १२:०४
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती जानी राखौ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्या’नरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित...
एकाएक केपी ओलीले करिश्मा मानन्धरलाई फोन गरेपछि…..
२०७८ असोज २ गते ११:३२
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरलाई फोन गरेका छन् । नायिका मानन्धरले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत अध्यक्ष ओलीले आफूलाई फोन गरेको जानकारी दिएकी छिन् । उनले फोनमा केपी शर्मा ओली भनेर आउँदा सुरुमा आफू छक्क परेको पनि उल्लेख...
२०७८ असोज २ गते १०:४२
काठमाडौं । मलेसियामा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी भएको छ। नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन) बीच नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी सुरू...
देउवा र ओलीबीच आज बिहान भएको गोप्य कुराकानी बाहिरियो, प्रचण्ड र माधव ठूलो तनावमा ?
२०७८ असोज २ गते १०:२५
काठमाडौं, २ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुत बनाएर बालकोट पठाएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र केपी शर्मा ओलीबीचको कुराकानी बाहिरिएको छ । उनीहरुबीचको कुराकानी बाहिरिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन् । प्रधानमन्त्री...
रामकुमारी झाँक्री एमाले प्रवेश ?
२०७८ असोज १ गते २३:०७
काठमाडौं, १ असोज । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन् । मिनभवनस्थित केन्द्रीय कार्यालय उदघाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका हुन् । उनले भने ‘म प्रधान्मन्त्री भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थें, आशा...
एमालेमा रहेका तेस्रो धारका नेताहरु एकीकृत समाजवादीमै फर्किने माधब नेपालको खुलासा
२०७८ असोज १ गते २३:०५
काठमाडौं, १ असोज । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेमा रहेका नेताहरु ढिलो चाँडो आफ्नो पार्टीमा आउने बताएका छन् । कतिपय नेता कार्यकर्ता अल्मलिएर एमालेमै बसेको र असल भावना भएकाहरु ढिलो चाँडो एकीकृत समाजवादीमै आउने उनको दाबी छ । शुक्रबार एकीकृत वैदेशिक...
२०७८ असोज १ गते २२:३१
काठमाडौं, १ असोज । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसिसीलाई नेपालमा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुअघि काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘एमसिसी अमेरिकी जनताका तर्फबाट गरिएको निस्वार्थ आर्थिक सहयोग भए पनि...
युएसबी कण्डम के हो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
एजेन्सी । युएसबी क’ण्ड’मः झ्वाट्ट सुन्दा परिवजार नियोजनको साधन होकि जस्तो लाग्छ । तर यो परिवार नियोजनको साधन होइन। यो एक किसिमको प्रोटेक्सन हो जसले अहिलेको एन्ड्रोइड प्रविधिको स्मार्टमा दुनियाँमा ख’तरनाक सं’क्रमणबाट बचाउने काम गर्छ । आज भोलि हामी स्मार्ट मोवाइल बिनाको जीवन सम्भवतः...